Published : May 12, 2012 | Author : युवराज नयाँघरे
Category : Essay / निबन्ध | Views : 975 | Rating :
किनारमा छु रगते आहालको !<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
सधैं त काठमाडौं छोडेर घरै पुग्थें दशैं मान्न । यो पालि खै के लाग्यो, यो उपत्यका छोड्न मानेन मन । थच्चिएं यै उकुसमुकुसमा । लाग्यो, यो कान्तिपुरको दशैं हेरौं ! यसको पोल्टामा थच्चिनेका दशैंमा मिस्सिउँ र मनाउँ आँफै पनि ।
बटुल्न आएको छु शान्ति, चकमन्न, मौनता र सुनसानले दिने ज्ञानको अर्थ । मूर्तिमा लिपिएको रङ, मूर्तिमा खिपिएको कला र मूर्तिमा ओर्लिएको चरित्रले दिने दीक्षा जान्न आएको छु । मेरा निम्ति धर्म त्यै हो, अध्यात्म त्यै हो र दर्शनको गहन तरङ्ग त्यै हो ।
हाम्रो पुर्खाको मान्यता यस्तै शक्तिको सेरोफेरोमा रहँदै आएको छ । त्यो उपासनाले बलशाली बनायो र भनिरह्यो-'तिमी अघि बढ !'
थाहा छैन-त्यो मौनतामा मानिसले कति शक्ति पायो, कति ऊर्जा सङ्कलन गर्‍यो र कति तागत बिस्तार गर्‍यो । हो, शक्तिपीठ पुग्ने क्रम रोकिएको छैन अद्यपि ।
आँखाले रगतका बाच्छिटामा नुहाइरहेको छ घरीघरी ।
बोका, कुखुरा, पाडा र हाँसका रगतले आहालमय छ मैले टेकेको मन्दिरको पटाङ्गिनी । रगतले बोकेको रातोभित्रको रङमा अरु जम्मै रङ बिलाएका छन्, हराएका छन् र समाहित छन् । यी घोलिएका रङले मलाई आफ्नोअर्थ र मूल्यका चौर औंला ठड्याएको देख्छु म पटकपटक ।
खुट्टाका घुँडासम्म रगतका सिर्का र बाच्छिटाले लत्पताएका छन् । जताततै रगतका टाटा र थोप्लाथोप्लीले एउटा दिगमिगभित्र आउने सबैखाले विचारको चित्र आउँछ, शब्द आउँछ र तर्कना आउँछ । भुावरी उठ्छ पटकपटक ।
त्यसो त यो नौदिनभरि देशका शक्तिपीठमा निरन्तर छ रगतलीला । त्यो पढेको वा झिल्काझिल्कीले छोएकै हो छातीमा । अहा, यसरी आँखैले देखिएको थिएन भने नि हुने-यसअघि ।
यो पीठको सबै सत्तलमा निधार रागाएका बाहुनहरू चण्डी भट्टयाइरहेका छन् । दुर्गासप्तशती पढ्नेका घोक्रा सुकिसकेका देखिरहेछु म । देवी भागवत पढ्नेका चिमचिमे आँखामा तलमाथि गर्छ चस्माको डन्डी ।
यी हरेक घामपानीमा दृष्टि पुर्‍याइरहेकै छन् मेरा आँखाले ।
रगत बाहेक क्यै नभएको पटाङ्गिनी ! ठाउँठाउँमा गाडिएको छ मौलो । धेरै ठाउँमा मौलो गाडिन सक्छ भन्ने अनुमानमै पनि मार हानिएको छ । रगतले देखाइरहेको छ-कम भो मौलोको सङ्ख्या !
एउटा जुल्फेले आफ्नै उमेरको पाडोको घाँटी मुनिको किल्किले समाएर चुप्पीले काट्यो स्वाट्ट ! अनि पाडोको लामो कण्ठनली तानेर वरिपरिका मूर्ति पखाल्यो रगतको धारोले । शरीरमा रगतको अभावले जिउँदो पाडो ढल्यो गर्ल्याम्म । उता निर्जीव मूर्ति रक्तस्नानले उज्यालियो झन्झन् ।
कुखुराका भाले रेटिरहेका देखिन्थे किशोरका हुल । तिनका शरीरमा पुसंत्वको एउटा बिरुवासम्म उम्रिएको थिएन-तर ती मार हान्न र भाले रेट्न खुब डटेका लाग्थे । मृत्यु र जीवनको-एकदमै नमिल्ने खोलो बगिरहेथ्यो यहाँ ।
टाउको छुट्टयाइएका कुखुराका मुख एकातिर देखिन्थे प्याकप्याकी पारिरहेका । अर्कोतिर छटपटाइरहेका हुन्थे गिँडिएका ज्यान । कुनैकुनै त दशहात परसम्म उच्छिटिएर गई उफ्रिरहेका हुन्थे । गति भनेकै त्यही । टाउको र ज्यान छुट्टीँदा त त्यो ऊर्जा छ भने-सिङ्गो जीवनमा कति धेरै हुँदोरहेछ सामर्थ्यको लय !
रगतको खोलो छ वरपर । आहालजस्तो ठाउँ, रगतको आहाल । रगत आँफै जमेर दलदल छ । जम्न नसकेको तह बगेको छ खोलाको धारमा । हाड्याइँदो रङ बोकेर छेवैको नदी कुदेको छ तल....तल...।
एउटी युवती कसोकसो हुत्तिएर परी रगतको भासमा । ऊ आत्तिएर कराई र ओठबाट रगतका विरुद्घ भुत्भुताई केही शब्द । त्यो आवाजमा धर्म र पापको विवेचना कति आयो ? पूजा गर्न मन्दिर आएकी नारीसँग कुनै प्रश्न गर्ने साहस बटुलिनँ मैले ।
रगतको टाटोले रालो नै लाटो छ घन्टीको । बोल्न सकिरहेको छैन ऊ । आवाज थुनिएको छ रगतको लतपतले । घन्टीलाई पूरै छेकबार लाएजस्तो-रगतको छिटा र लेस्याइलो स्पर्शले । टड्कारो आवाज रगतले निलेछ घन्टीको-लोसे र सुस्त स्वर आउँछ मुस्किलले ।
मन्दिरमा चढाइएका हरिया पात छन्-रातै पल्टिएका । फूलमा अरु रङ चढेको छ रगतको । हरिया पातले मौलिकता गुमाएर रगतको रङमा हाँसेका छन् ती ।
पटाङ्गिनीपूर्व बोका लिएर उभिनेहरू छन् लामबद्घ । हातमा डोरी लिएर रगतका आँखा, मन र संवेदनामा उभिएको हुनुपर्छ तिनले । धमाधम मार हानिन्छ । एक, दुई र अन्त्यमा एकको पछाडि दुई शून्य हालेर पनि पुग्दैन । झण्डै चार वा पाँच अङ्क उभ्याएर अरु त्यस्तै सुन्ना नहाली धरै पाइन्न । मारको सङ्ख्या गन्न नि समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।
आँखा हेरिरहेका, खुल्ला । ट्वाल्ल, आकाश हेरिरहेका । जिब्रो टोकिरहेका र कान हल्लाएका एकाधले । ज्यान र टाउका अलग पार्नेका कुइनेटादेखि कम्मरसम्म रगतको धोईधाई छ । छिटा देखिन्छ मुखभरि । कान, नाक, जर्नी वा आफ्नै गर्धनसम्म । रगतले पुछपाछ गरिएका तिनका अनुहारले रगतमा पौडिएर आएको प्रमाणपत्र देखाउँछन्, हामीलाई ।
सिरिङ्ङ हुन्छ मनको हरेक कुनाकाप्चा ।
तलबाट घाँटी रेट्नेले रगत भेला पार्छन् थाल, कचौरा र बटुकामा । अनि पातमा रगतका तीनचार थोपा मन्साएर ढोग्छन् । उता ढलिसकेको हुन्छ एउटा जीवन त । रगतको आहालमा अरु थोपाथोपी थपिएर अग्लिएकै हुन्छ दलदल ।
उसले समाउन खोजेको चङ्गा मेरै अगाडिको रगतको दलदलमा खस्छ स्वाट्ट । चङ्गा लिएर रगते भासबाट बाहिरिएपछि खिन्न हुन्छ ऊ । एकातिर चङ्गा हात परेको विजयी मुस्कान त छ नै । फेरि रगतले लत्पतिएको चङ्गा उडाउन खोज्दा नउडेपछि-भएको खिन्नताले उसलाई विरक्त तुल्याउँछ । ऊ घरीघरी टकटकाउँछ रगतलाई । कागजमा टाँसिएको रगत पनि गरुँङै हुँदोरहेछ हावाका लागि । लत्पतिएको चङ्गा क्यै गरी उड्दो रहेनछ ।
चङ्गा नउडेपछि सराप पायो रगतले, किशोरबाट ।
कान, आँखा, नाक र मन गतिमान् छन् मेरा यतिखेर ।
दिनसँगै बढिरहेको छ रगतको आहाल । त्यो हुनुको अर्थ हो-मानिसहरू थपिए यहाँ । चहलपहल बढ्यो । अरु हानिए तरबार । खुकुरी, चुलेसी र खुँडाहरू अरु चले । निकै धारिला हतियारको प्रयोग छिटोछिटो भएको हुनुपर्छ ।
मने अलिक अघि उसको बाबुले छिनालिसकेथ्यो । सानाको खुशीभन्दा ठूलाको सन्तुष्टिले जित्ने ठाउँमा त्यो 'मने' को अर्थ थिएन ।
हो, छेवैको रगते आहालमा थपिएथ्यो एक तह । म हेर्छु -नजिकै परेवाका साना बच्चाहरू रगतमा लत्पतिएर कुनाकाप्चामा गरिरहेछन् चिउँचिउँ । प्वाँख उम्रेका परेवा नि रगतमा टाँस्सिएका चामल, तिल र जौका गेडा सक्तैनन् टिप्न । हेर्छन् मात्र । तिनलाई लाग्दो हो-यी दानामा जीवन छैन, बरु छ मृत्यु ।
शरीरका पहेँला भुत्लामा उडानको वेग भरिनु त कहाँ हो कहाँ ! रगतको लतपतले ती कलिला परेवा थच्चिएका छन् बरु ।
ऐनाजस्ता टलक्क टल्केका खुँडा घरीघरी धोइन्छन् रगतका सिर्काले । चारै कोणमा उठेका छन्- खुकुरी र खुँडा । साना, लामा, छोटा वा मझौला अनेक आकारका छन् ती हतियार । तर सबैले बोलेको भाषा उही छ, सबैको उपस्थिति उस्तै छ र हरेकको मूल्य एकै छ ।
मैले यतिखेर उपत्यका भित्रका मैतीदेवी, म्हेपी, नरदेवी, नक्साल, वसन्तपुर, भद्रकाली सम्झेँ । जहाँ यही दृश्य र चरित्रका उस्तै चहकिला तस्वीर देख्न पाइन्छ ।
ओहो, कति छिटो आउँदो रहेछ मृत्युको चाल !
अलिक अघि मात्र बासिरहेको रातो भाले दुईतिर छुट्टीईसकेछ कति चाँडै । भर्खरै भित्तामा सिँगौरी खेलिरहेको जखमले बोको दुईतिर बाँडिइसकेछ कति छिट्टै । केही अघिसम्म पात ठुँगिरहेको कलेजी रङको हाँस दुईतिर बाँडिइसकेछ कति हतारमा ।
आहालमै उभिएर मन्त्रोच्चारण गर्नेका अनुहार पढिरहेछु म । आहालमै टेकेर फूल छर्कनेका आवाज सुन्छु म । आहालमै फड्को मारेर बत्ती बाल्नेका ओठमा छरिएका खुशी र सन्तोष पढ्छु म ।
रगतले घेरिएको सानो पटाङ्गिनीमा युवतीका गोरा पैतालामा टाँसिन्छ डरलाग्दो आलो रगत । तिनका आँखामा कति प्रतिशत अँध्यारो र कति प्रतिशत उज्यालो ��"र्लियो यतिबेला ?
रगतले अर्थ्यएको भाषा हुँदोरहेछ एउटै ।
एउटी अधबैँसेले मूर्तिलाई चढाएको स्याउ गुडेर खस्यो रगतकै लतपते दलदलमा । त्यसलाई नाकनिक गर्दै टिपी उसले । अनि निकै पटक पुछी सप्कोले । फेरि धोई तलको खोलामा गएर । मास्तिरकै रगत बगेथ्यो खोलामा पनि त । निकै पुछपाछ गरी उसले । खोई, उसको मनले मानेन । कर्‍याम्म टोक्न ओठसम्म ल्याएकी त्यो स्याउ तलै राखी । त्यत्तिक्कै रह्यो त्यो । रगते आहालबाट उडेर आएका झिँगाले घेरिएको छ त्यो स्याउ, अब त !
उसले गरेको गफ सुन्छु-'म एकै हातले छप्काउँथे पैला । बिहानभरि त एकै हातले छिनालेकै हो नि !'
जे होस्, रगतको आहालमा थपिएको छ केही अरु ।
एउटी सानी केटी निकै अघिदेखि पर-पर सिँढीतिर केही खोजखाज गरिरहेकी देखिन्थी । उसका टाउकामा थियो सानो मजेत्रो । उसले निहुरेर टाकनटुकन पैसा खोजेकी लागिहेथ्यो मलाई ।
कुनबेला-कुनबेला ऊ उभिएकी रहिछ मेरा छेउमा ।
ऊ उभिइरही मेरा अघिल्तिर ।
मेरा छेवैमा थिए धोती फेरिरहेका वृद्घ ब्राह्मण । उनले आफ्नोकमीजबाट झिके एक रुपियाँको डबल । डबल केटीको हात परेन । गुड्दै गएर लत्पतियो रगतमा ।
रगतमा चोबलियो डबलको एक भाग । ऊ सिन्काले तानिरहिछ पैसा । तर डबल त झन्झन् गाढिन्छ रगते दलदलमा । ऊ त्यो डबल झिक्न चारैदिशा घुमिसकी ।
औंलाले पैसा छुन डराइरहेकी त्यो केटीका पिँडुलाभरि रगतका छिटा र दलदलले छोइसकेको छ । तर उसले झिक्न सकेकी छैन डबल । उसको कन्चट र नाकेडाँडीमा चिट्चिट् छ पसिनाको । आक्रोश, आकुलता र आशाले घेरा हालेको छ उसको अनुहारमा ।
मैले पूर्वपट्ट देखेँ, बलियो बाबु आफ्नो किशोर छोरालाई सिकाइरहेछ कुखुराको भाले रेट्न । भालेले पहिला त केटालाई ठुँगेर बच्न खोज्यो । तर हतियारका सामु रगत नबग्ने कुरै भएन ! खुट्टा समाई अँठ्याइदियो बाबुले । छोराले टाउको राख्यो खुकुरीमा अनि गर्धन दबायो ढुङ्गाले । मूल हड्डी भाँच्चिएपछि छोराले छिनाल्यो भाले । उसले रिसले भालेको रगतले छेउछाउका सबै मूर्ति पखाल्यो ।
मरेको भाले झुण्ड्याएर र्फकंदा किशोर बोलिरहेको थियो-'साला, तेरो सारा फुर्ति यो रगतै त हो नि !'
बिहानको दस-एघार बजेको हुनुपर्छ अहिले । जुन वेग, जुन तीव्रता र जुन आँधीसाथ रगतको भेलबाढी आएको छ-यो ठाउँ मात्र होइन सारा देशकै मूर्तिहरू परिपूर्ण भइसकेको हुनुपर्छ ।
जुँगाको रेखी बसेको एउटा तन्नेरीले बोकालाई छप्काउन खोज्यो । खुकुरी गर्धनमा परेन, पर्‍यो खुट्टामा । बेस्सरी करायो बोका ।
ऊ अब भगवान्लाई चढाउने गर्धन छिनाल्न लागिपर्छ । एक पटक, दुई पटक, तीन पटक । उफ् ......बल्ल चार पटकमा छिनालिन्छ बोका । यस बीचमा बोका कराएको र हल्लीखल्ली मच्चिँदा वातावरणमा उत्तेजना फैलिन्छ बेस्सरी । हारजितको प्रतिक्रिया हरेकको ओठमा झुन्डिएको देख्छु ।
एकै छप्काइमा बोका नछिनेको वेदनामा तन्नेरीको अनुहारमा आएको प्रहारको तुफान देखेर धेरै वृद्घका छातीमा कम्प छुटेको हुनु पर्छ । म त हिंसाको ठूलो हुण्डरी आएको अनुभूतिमा परें त्यस घडी । छ्याक्छ्याक् भएको गर्धनबाट रगतको मुस्लो पनि बग्यो छरिएर । मूल फुटेको बगरजस्तो ।
रगत सुक्ने र थप्ने क्रम निरन्तर छ । पटक पटक रगतका छिर्का थपिन्छन् । स-साना खोल्सी भएर आफ्नोनयाँ रुप बनाएको देखिरहेको छु म यहाँ । नदी बन्छन्, सुक्छन् र फेरि अनौठो रुपमा यो दलदलले आकाश निर्माण गर्छ ।
सानो कालो पाठीलाई पछाडि दुई खुट्टा समाएर बसेको वृद्घले भन्यो-'ए केटा, पाठीलाई पर्सी-पर्सी !'
खुकुरी समाएकै केटाले कचौराको पानीले पाठीलाई छर्कियो । पाठी त मौन । कहिले कहिलेदेखि होस गुमाइसकेको छ उसले । गर्धन तन्काएर बसिरहृयो ।
मसँग आज रगतको हिसाबकिताब मात्र पो भो' त ! आधादिन चैँ रगते आहालको किनारले दिएको तस्बीरले मेरो मन भरियो टम्म । कान त्यसैले भरियो । आँखा त्यसैले छोपियो । मनभरि यी रगतका गीत, सङगीत र स्वरमा थल्लिएँ म ।
मैले हेरिरहेँ, रगतका अरु धेरै थोपा खसे । थोपा-थोपामा जीवन थियो । संसारले बोकेको जीवन थियो । यो संसारमा सबै खालका चरित्र थिए । तर अब थोपा भएर सुक्छ कट्कटिँदो, कक्रिँदो र रातो टाटो !
रगत बग्दा त आवाज नहुने-बगिसकेपछि पो होहल्ला । संसार यही प्रतिक्रिया दिन बसेको छ । गर्धनमा तरबार पुगिसकेर आउने आवाजपछि नै बोल्दो रहेछ संसार ।
खुाडा र चुलेँसीका धार हेरीहेरी बसेँ । खुकुरीका सेता चम्चमाइ र रगतले लत्पतिएका धार छेउमा रहेँ । संख्या गन्न थालेपछि गुण बिर्सिंदो रहेछ । रगते आहालमै थिएँ । हेर्न र तरङ्गित भई-भई कतिन्जेल समय फर्काउन सकिन्छ र ?
भगवानलाई बलि चढाइएको थियो । पशुलाई मार हानिएको थियो । देउतालाई भोग दिइएको थियो ।
मैले आँखा खोल्दै, बन्द गर्दै सबै कुरा हेरिरहेँ । हरेक तरबार चलाइ हेरेँ । खुँडा उठाइ हेरें । खुकुरी हनाइ हेरें ।
निकै अघिदेखि अनेक कौतुक अनुहारमा एउटा खैरो रङको विदेशी जताततै तस्बीर खिचिरहेको देखिरा'छु म । ऊ हतास छ, व्यग्र छ । कता-कताबाट आइपुग्यो मेरो छेउमा ।
'पाप चैं के त ?' विदेशीले क्यामेरा तेस्र्याएर सोध्यो ।